Fampianarana handrindrana ny fonja amin'ny iOS 8.1.2-8.4 | Vaovao IPhone
Minitra vitsy lasa izay dia namoaka ny jailbreak ho an'ny iOS 8.3 ary efa manana tutorial voaomana izahay hahafahanao mametraka azy amin'ny iPhone, iPod ary iPad anao. Tsotra ny fomba fiasa, saingy amin'ny fiteny sinoa daholo izany ary heveriko fa tsy misy mahatakatra izany ny mpamaky antsika, mila mandray dingana ianao alohan'ny hahitanao azy. Luken (Fiarahabana sy fisaorana indray).
1 Ahoana ny fomba fampidirana am-ponja ny iOS 8.3
1.2 Fitaovana mifanentana
1.3 Dingana tokony horaisina
Ahoana ny fomba fampidirana am-ponja ny iOS 8.3
Manoro hevitra anao foana ny hanao kopia voafafa amin'ny fitaovanao hialana amin'ny fahaverezan'ny fampahalalana mety hitranga.
Manaova famerenana madio mba hisorohana ny glitches mety hitranga.
Mila esorinao ny kaody mamoha (sy Touch ID, raha anananao) sy ny serivisy "Tadiavo ny iPhone".
Raha mahazo ny hafatra "Storage saika feno" ianao dia tantano Cydia.
Raha tsy mahomby ny jailbreak dia vonoy ny WiFi ary manandrama indray.
iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5 ary iPhone 4s
iPad Air 2, iPad mini 3, iPad Air, iPad 4, iPad 3 ary iPad 2
iPad mini 1 (iPad mini 1 voalohany), iPad mini 2 (Retina iPad mini), iPad mini 3
iPod ny 5 ny taranaka
Dingana tokony horaisina
Misintona sy mamaha ny zotram-pifandraisana izahay HERE.
Mampifandray ny iPhone amin'ny solo-sainay izahay. Ho hitantsika fa manaiky antsika io.
Hamafana ny popcorn eto ambany izahay.
Mikasika ny bokotra maitso izahay.
Ho anao izay manana betas an'ny iOS 8.4 sy iOS 9 napetraka, satria manasonia ny iOS 8.3 i Apple ary tsy hijanona hanao izany raha tsy, angamba, adiny iray aorian'ny famoahana ampahibemaso ny iOs 8.4, azonao atao ny mihena tsy misy olana. Mba hanaovana izany, tsara kokoa raha manaraka ny torolalana momba ny mpiara-miasa amiko Cristina avy any ianao Ahoana ny fomba fihenam-bidy avy amin'ny iOS 9 beta mankany amin'ny iOS 8.3.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Fampianarana handrindrana ny fonja amin'ny iOS 8.1.2-8.4
84 hevitra, avelao ny anao
TSY MIASA IZANY AZA mampidina azy io fa fandaniam-potoana fotsiny ireto olona ireto fotsiny no mahasosotra antsika. REHEFA MBOLA MIALA AMIN'NY OFFICIALY REHETRA, HITSAHATSIKA REHETRA. DISO 100% ITY (Nosedraina). fiarahabana
Luken dia hoy izy:
Nozahana? Iza ny twitter-nao? Mandalo anao aho tratra? Tongava any an-tranoko hasehoko anao ny iPhone raha tianao.
Valiny amin'i Luken
Fantaro alohan'ny hitenenana hoe tsy misy dikany. Miezaha mamerina ny iPhone amin'ny 0 miaraka amin'ny iOS 8.3 ary manandrama indray, ho hitanao ny fomba fiasan'izy io….
XAM dia hoy izy:
Tsy mandeha amiko io fa mijanona 20% foana
Valiny amin'i XAM
@bueymc no vavako ao amin'ny Twitter. Raha nanandrana ianao dia tiako hojerena satria tsy niasa tamin'ny olona maro izy io, na, araka ny filazan'ny maro, dia mijanona 20% izany ary avy eo tsy mandroso lavitra intsony. Ka raha afaka asehonao ahy dia fanampiana lehibe izany. fiarahabana
omena 20% izy ireo satria heveriko fa tsy maintsy esorinao icloud, esory ny teny miafina. apetraho amin'ny maody fiaramanidina ary apetraho ny andro Jona izay tsy tadidiko, ary ny fotoana, izany no antony ananan'izy ireo izany, tadidiko fa nanao an'io aho, tamin'ny ios 8.1.2 miaraka amin'ny taig, arahaba!
KYKEGUASS dia hoy izy:
Izy io dia niasa lavorary tamiko nanakatona ny fikarohako ny iPhone, mikasika ny id ary ny kaody famaha
Valio amin'i KYKEGUASS
cyanize dia hoy izy:
ho an'ireo rehetra manao fahadisoana; na ny mpamily ary ny 20% ... hamafa iTunes, tanteraka. fandaharana paoma rehetra. mandehana any amin'ny moziko ary ao amin'ny folder iTunes, ovao ny fanitarana ilay rakitra ituneslibrary.idl ho ituneslibrary.bak ...
Mamerina ny PC anao ianao, misintona ny kinova 12.0.1 avy eto:https://secure-appldnld.apple.com/iTunes12/031-08058.20141016.34epp/iTunesSetup.exe
apetrakao io dia avelako ianao
Mamaly ny cyanize
José Crisanto Morillón Pérez dia hoy izy:
Amin'ny teny anglisy ihany koa http://taig.com/en/
Valiny tamin'i José Crisanto Morillón Pérez
Enrique Jose dia hoy izy:
Izy io koa dia niasa tamiko tsy nisy olana !!! 🙂 Andraso izao ny famoahana tweaks mifanaraka!
Valiny tamin'i Enrique Jose
Miraikitra amin'ny 20% (novonoiko ny zava-drehetra) ary tsy nisy !!
Mbola izaho ihany, ny zavatra rehetra nolazaina dia nonoina fa i nanai mijanona 20%
Niasa ho ahy izy io, nanala ny fikarohana ny iphone, kaody ary ny dian-tànana
Eny, najanoko daholo izany rehetra izany ary mijanona 20% izany.
Raha manana 20/30% sisa izy ireo dia satria nanavao ny OTA, noho izany dia tokony hamerina sy hanavao ...
tokony handeha izany.
Naveriko tamin'ny alàlan'ny iTunes fotsiny izy ary mijanona amin'ny 20%, izany hoe, ny antony dia tsy noho ny fanavaozana tamin'ny alàlan'ny OTA ary nanandrana in-3 aho ary mijanona ho 20% foana izany, indrindra indrindra, dia voasakana amin'ny dingana famerenana indray, avereno hatrany hatrany ny terminal
Na izany na tsy izany, mijanona amin'ny 20% izany, efa navadiko ny zava-drehetra ary tsy misy zavatra mandeha. Ahoana no hamahana azy?
Gabriel Marquez SiinMaas dia hoy izy:
Saurik dia mila manavao ...
Valiny tamin'i Gabriel Márquez SiinMaas
Namerina tamin'ny laoniny ny iOS 8.3 tamin'ny alàlan'ny Itunes aho ary tsy mila mitady iphone na kaody na dian-tanana izany fa mitohy mijanona amin'ny 20%
Androany ny fitsingerenan'ny andro nahaterahako (20 taona aho) ary fanomezana lehibe azon'ireto sinoa ireto ahy, mandeha tsara aho antenaina fa havaozina ireo fonosana! Misaotra betsaka!!!!!
Christian gutierrez dia hoy izy:
Aza mandany ny fotoananao amin'ity… Tsy mandeha io!
(Raha manaraka ny rohy amin'ny sary ianao dia hitondra anao any amin'ny pejy sinoa.)
Valiny tamin'i Christian Gutiérrez
xilan dia hoy izy:
Mamaly an'i xilan
Tsy fantatrao hoe avy aiza i Taig, sa tsy izany? XD
Ramon L. dia hoy izy:
Tsy fantatrao hoe avy aiza ny jailbreak, sa tsy izany? XD
Valiny tamin'i Ramon L.
Luis Xaviêr dia hoy izy:
Satria ny fitaovana dia sinoa, genius.
Valiny tamin'i Luís Xaviêr
Misy lesoka amin'ny solosaina 64-bit, izany no mahatonga antsika tratra 20%. Amin'ny solosaina 32-bit dia mandeha izy
mijanona amin'ny 20%
Adrian Otero Rifat dia hoy izy:
Eo amin'ny 8.1 aho ary hanavao ny 8.3 ankehitriny rehefa mivoaka i JB alohan'ny hivoahan'ny 8.4
Valiny tamin'i Adrian Otero Rifat
Alen dia hoy izy:
Tsy misy na inona na inona mandeha amiko mihintsy, ny marina dia heveriko fa paikady entina hanafainganana ny fivoahan'ny iOS 8.4 satria tsy mandeha ny marina, tsy mandalo 20% aho, naveriko indray mba hahitana raha misy zavatra madio raha Nataoko fa tsy misy tsy mandeha tsy minono. tsy misy funcaaaaaaaa aza very maina ny ezaka tsy misy funnncaaaaaa. azafady ny pejy hahahaha!
Valio i Alen
Paul E. dia hoy izy:
Alen misintona ny kinova Itunes 12.1.0 sy voila, dia miasa 100%. Zahao ny lahatsoratra alohan'ity iray ity, nisy olona iray antsoina hoe Cristhian nanondro azy ary milamina tsara
Valiny tamin'i Pablo E.
Eduardo Mendez dia hoy izy:
Ry namako tsy fantatro raha tokony hataoko izany satria vao navoakan'izy ireo androany, misalasala aho milaza amiko izay atahorako mba hampidina azy io (dingana tsirairay hialana amin'ny fanelingelenana) ary misaotra anao
Valiny tamin'i Eduardo Mendez
Azoko apetraka amin'ny Win 7 64bit izany fa noho ny antony tsy fantatry ny mpamily itune ahy amin'ny kinova farany. Tsy maintsy nesoriko ny kinova itunes farany ary apetraka ny kinova 12.0.1. Toy izany koa no tsy maintsy nataoko tamin'ny andiany taloha an'ny TaiG (iOS 8.1.3). Saingy aorian'ny mahazatra rehetra dia tsy maintsy namono ny kaody hidin-trano aho ary nahita ny ipad ary dia izay. Napetraka amin'ny iPad mini 1
Salama Jean, aiza no ahafahanao misintona iTunes 12.0.1?
Iphonemax dia hoy izy:
Amin'izao fotoana izao dia mbola eo amin'ny 8.1.2 aho miaraka amin'ny jailbreak tena mafy orina. Tsy te-hikorontana aho. Ankoatr'izay ny fampiharana toa an'i Semirestore dia tsy vonona ihany koa. Mila miandry ny zava-drehetra hatao ofisialy ianao ary handeha tsara 100% na avy eo tonga ny nenina.
Mamaly an'i Iphonemax
Daniel Orlando Zapata dia hoy izy:
Midika izany pejy sinoa izany fa manana ny iTunes farany anao ianao ary tsy maintsy misintona kinova taloha ianao ary amin'io pejy io dia manome safidy iTunes roa ho an'ny pc 32-bit ianao ary ny iray hafa ho an'ny 64 miaraka amin'ny iTunes farany tsy mandeha.
Valiny tamin'i Daniel Orlando Zapata
Misaotra betsaka. Ao amin'ny iPhone 6 nohavaozina miaraka amin'ny iOS 8.3 dia nanana ny olana 20% loop aho. Nanandrana PC hafa aho tamin'ny fametrahana ny iTunes 32-bit avy amin'ny dingana 2 ary niasa tsy nisy olana izany.
naldo dia hoy izy:
Mora ny mahita ny zavatra rehetra dia mitovy, ny zavatra tsy maintsy atao amin'ny iTunes dikan-12.0.1 amin'izao fotoana izao no nataoko ary mazava
Mamaly an'i naldo
Ka ny azy izao dia hametraka ny iOS 8.3 satria manana iOS 8.1.2 aho, ary miandry ny cydia hiasa tsara, sa tsy izany? Na raha mivoaka ny iOS 8.4 ary manana iOS 8.1.2 aho dia tsy ho afaka jailbreak na misy fomba hanatanterahana izany amin'ny alàlan'ny fisian'ny iOS 8.3 .. Misy olona afaka mampahafantatra ahy raha afaka manao an'io toa io aho, raha Tsy mamerina amin'ny laoniny sy mampakatra amin'ny iOS 8.3 aho
Avereno amin'ny iOS 8.3 izao ary manaova Jailbrake. Rehefa efa nametraka cydia ianao, rehefa manavao izy ireo dia hanavao anao ihany koa. Raha mivoaka ny iOS 8.4 ary manidy ny fitrandrahana izy ireo dia efa ao amin'ny ios 8.3 ianao miaraka amin'ny cydia, izany hoe tsy hanana olana ianao.
Toy izany koa no mitranga amiko rehefa Christian Gutierrez, inona no azo atao ????
Efa nanandrana ny iTunes tsirairay efa navoaka aho ary tsy nisy, Voavahaiko aloha ny olan'ny mpamily, fa izao miverimberina hatrany hatrany amin'ny 20% ary tsy mitranga avy eo no manipy ahy rehefa elaela ny lesoka 1101 Heveriko fa
Daniel Iglesias Meyer dia hoy izy:
Nametraka azy io aho ora vitsy lasa izay ary mety amiko tsara io, tsy misy olana, iphone 5s
Valiny tamin'i Daniel Iglesias Meyer
daniloveyou dia hoy izy:
Fantatrao ve hoe rahoviana no hivoaka ho an'ny mac izy io?
Mamaly an'i daniloveyou
Handeha haitraitra zato isan-jato aho amin'ny windows 8.1 32 amin'ny iphone 5s fa tsy maintsy apetrakao fotsiny ilay iTunes teo aloha Graceaaaaasssss
Placeholder sary Miguel Miguel Morales
Valiny tamin'i Julian Morales
Miasa maranitra amin'ny finday 4s .. Tsara be !!!
Valiny tamin'i Ricky
Nandaitra tamiko io, fa ankehitriny manana efijery fanefana banga aho, inona no azoko atao?
Raha lazaina amin'ny teny hafa dia tsy mivoaka ny fikirana, tsindrio ny efijery ary banga izany. azafady mba ampio ny fanampiana
Iza no efa manana ny Jailbreak mihazakazaka, inona no fanitsian'izy ireo? 🙂
Alvao dia hoy izy:
Apetrako ilay fitaovana ary tsy hita ny iphone-ko ary ajanoko ny id id sy kaody rehetra izay ataoko ???
Mamaly an'i Alvao
Mijanona eo amin'ny 20% izany satria tsy maintsy esorinao ny iTunes ary alefaso ny kinova ambany, nataoko izany ary niasa ho ahy izy, saingy hey, napetraka ny jailbreak fa tsy mandeha izany raha tsy manavao ny cydiasubstrate araka ny filazany izy ireo.
Salama, ho an'ireo rehetra miandry fanavaozana avy amin'ny saurik, tsy hisy izany, milaza kosa fa taiG no tokony hametaka ny kernel hamahana ireo olana amin'ny substrate finday,
Afaka manazava amiko ve ny Cydia Substrate, mitovy amin'ny cydia ve izany?
Izy io dia niasa tamiko tamin'ny iTunes 12.0.1, miaraka amin'ny kinova ankehitriny dia manana olana amin'ny mpamily izy ary amin'ny kinova 12.1.0 dia nijanona 20%
Santos Molina dia hoy izy:
Nanome ahy bibikely ihany koa izy io, ka hiezaka aho amin'ny ipad mni madio miaraka amin'ny 8.3 ary azo antoka fa ho azo atao ... toy ny mahazatra. avereno amin'ny laoniny ny jailbreak ary apetraho ny backup
Valiny tamin'i Santos Molina
Chic dia hoy izy:
Salama. Nametraka azy aho tamin'ny fisintomana ilay kinova iTunes. Ary nanontany ?? Manana programa marobe amin'ny PC toa ny tomtom aho, hamindrana azy amin'ny iphone azo atao ve? dia ny manome ahy hadisoana
Mba hahafahanao mampita ireo programa, ny fomba tokana dia ny fananana ny Appsync?
Valiny amin'ny chic
CADAN dia hoy izy:
Rehefa avy nanao ezaka tamin'ny fanatanterahana ny jailbreak dia lazao aminao fa afaka nanao izany tamin'ny fitaovako rehetra (iPhone sy iPad) tsy nisy olana aho ary tamin'ny fotoana voalohany haingana dia haingana dia izao no fotoana hanavaozana ny substrate cydia ary hihazakazaka.
P.S. Nahavita izany tamin'ny imac niaraka tamin'ny boot camp aho ary nandresy tamin'ny 8.1
Valiny amin'ny CADAN
Jovanni dia hoy izy:
Tsy vitako izany, mahazo hafatra aho fa mila mametraka zavatra ao amin'ny iTunes, azafady mba ampio !!!
Valiny tamin'i Jovanni
Mitranga amin'ny olona iray ve ny tsy ahafahany mametraka na inona na inona ao amin'ilay fivarotana app? Manana jailbroken aho ary tsy hamela ahy hametraka na hanavao izany
Efa voavaha io, tweak an'i cydia
SergioV dia hoy izy:
Ho an'ireo izay tsy mahomby ary mijanona amin'ny 20%, zahao ny lafiny fiarovana. Alao ny zava-drehetra, ao anatin'izany ny "kaody tsotra." Niasa ho ahy izany taorian'izay.
Andramo ary hoy ianao, mba hahitana raha izany no izy, be dia be ny olona very.
Valiny tamin'i SergioV
Xplertor dia hoy izy:
Olana mpamily paoma 20% - vahaolana Ampidino ny iTunes.
Vantany vao vita ny jailbreak dia havaozy ny Cydia REHETRA (mety ho efijery mainty io ary tsy misy safidy hafa ankoatry ny famerenana amin'ny laoniny ny zava-drehetra)
Avy eo tsy maintsy ampidirinao ny angona kaonty Icloud raha te hanana ny AppStore (tsy ampiasaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny na amin'ny voalohany fotsiny)
Ny zava-drehetra amin'ny 100% na dia ao amin'ny iFUNBOX aza tsy azoko atao ny mampihetsika ny tionelina USB na miditra ny fakan'ny rafitra.
Mamaly an'i Xplertor
Ami the itune dia misokatra ho ahy, tsy manokatra varavarankely aho handanjalanja ny jailbreak izay manampy agoooooo
J Eduardo dia hoy izy:
Izy io dia niasa ho ahy tamin'ny voalohany, mila nanala ny iTunes farany teo fotsiny aho, ny programa Apple rehetra ary nanova ny fanitarana iTunesLibrary. Avy eo hametraka ny kinova 12.0.1 izy ary hampiato ny viriosy fanoherana ahy.
Vonoy ny Wifi-ko, kaody hidy ary «Tadiavo ny iPhone»
Ataovy toy ny mpitantana sy voila ny programa, tonga lafatra izy io.
Avy eo dia nahazo ilay fanavaozana ny mpiorina Cydia amin'ny farany aho. Hatreto aloha dia nampiditra tweaks vitsivitsy hitako tamin'ny Internet nifanaraka tamin'ny iOS 8.3 ihany aho na dia te-hahita raha misy lohahevitra amin'ity kinova ity satria tsy hitako izy ireo.
Valiny tamin'i J Eduardo
latostadorano dia hoy izy:
Mampalahelo fa an'ny Windows ihany io!
Mamaly an'i latostadorano
Salama, nanandrana aho fa ny iphone 6 tsy mahalala ahy, milaza amiko fa tsy manana mpamily napetraka aho. Izaho dia nametraka itune 12.0.1 ary avy eo mametraka ilay farany ary tsy misy. Fantatrao ve izay mety ho? Nanandrana solosaina roa aho fa tsy nisy, valiny iray ihany.
John jairo jaramillo dia hoy izy:
Tsy mandeha amin'ny paralles milina virtoaly IN MAC raha misy olona manampy ahy arahaba tsara kokoa avy any Espana
Valiny tamin'i John Jairo Jaramillo
ny milina virtoaly dia ny windows 7
Mandiso ahy tsy tapaka aho amin'ny 60% hiverina hiverina hanarenana aho ary manandrana indray. Tamin'izany no nanondroan'izy ireo fa mila mametraka maody fiaramanidina ianao. Niezaka aho ary tsy nahomby ahy izany. Mitaky toy ny 10 minitra ka hatramin'ny 60%
Rehefa manavao dia avereno madio. Ka raha mandeha tsara.
Nanao ny jailbreak tamin'ny iPad sy ny iPhone 5s aho, tamin'ity farany ity rehefa nanomboka ny cydia aho dia nahazo fanavaozana manan-danja, ekeko izany, miverina indray ny lohataona ary mamely ny birao finday, tsy misy hita, ny mpanamory efijery fotsiny Tsy mandeha izy, miverina mamerina amin'ny laoniny aho, manao ny jailbreak ary mametraka ny kopia backup farany, ny zavatra mitovy, efa in-3 niaraka tamin'io ihany aho, tonga lafatra ny zava-drehetra amin'ny ipad mini2. mitranga amin'ny olona iray izany
John A. dia hoy izy:
Salama, nanao ity manaraka ity tamin'ny iphone 5s aho ary niasa lavorary. Tsotra be: nanidy an'Itunes aho ary nanomboka nigadra araka ny fampianarana. Handany 60% maharitra izy nefa tsy maninona, avelao izy hivoaka fotsiny. Naharitra adiny iray sy sasany ka hatramin'ny 2 ora farafahakeliny aho vao vita fa vitanao ny asa. fiarahabana
Valiny tamin'i John A.
Tsy mahita ahy ny fitaovako, milaza izany satria tsy hita ny mpamily paoma, inona izany? Izay tsy maintsy ataoko? mba ampio.
tsy maintsy misintona ny kinova iTunes vaovao indrindra ianao 12.0.1 miaraka amin'ity dia mandeha tsara
Mitovy amiko amin'i Alejandro no mitranga amiko
gana dia hoy izy:
Ny lesoka mitovy amiko ihany no mahazo ahy tahaka ny hafa .. tsy mahafantatra ahy ny mpamily, misy fanampiana ve?
Mamaly an'i patO
Raha mandeha izy io rehefa voasakana amin'ny 20, omeo izy hanesorana ilay programa fa aza atao, omenao ny bokotra havanana hiverina ary toy izany hatrany amin'ny 100, tsy maintsy nomeko azy in-5.
Salama daholo. Tiako izany, niasa tsara ho ahy ny zava-drehetra, ilay substrate hanavao ihany dia tsy azoko izany fa tsy misy fiantraikany izany
kyrin dia hoy izy:
Azafady, karazana iTunes inona no ampiasanao amin'ny jailbreak? … Afaka mahazo fampandrenesana momba ny iTunes aho ary manome rohy iray ho ahy!
Mamaly an'i kyrin
Aleg1422 dia hoy izy:
Nataoko izany tsy nisy olana tamin'ny iTunes 12.0.1.26, miaraka amin'ilay kinova farany tsy azoko satria nandefa lesoka izy io
Mamaly an'i Aleg1422
Salama, avy aiza no ahafahako misintona iTunes 12.0.1 ???
Miarahaba namana efa nigadra tao amin'ny 8.4 aho nefa nahagaga fa tsy nisy na inona na inona nanakana ahy tsy hanokatra vahaolana ankoatra ny famerenana amin'ny fisaorana i cydia
Danuil dia hoy izy:
tapaka avokoa, maody fiaramanidina ary mijanona amin'ny 50%
inona izany ????
Valiny tamin'i Danuil
Ahoana ny fomba hanaovana ny iPhone hamaky lahatsoratra mafy
TaiG dia namoaka jailbreak Untethered ho an'ny iOS 8.3